I-Skype-thambileyo ye-Android - simahla. I-Skype lelona ethandwa kakhulu ividiyo unxibelelwano inkonzo - IVIDIYO INCOKO - EWE!
I-Skype-thambileyo ye-Android - simahla. I-Skype lelona ethandwa kakhulu ividiyo unxibelelwano inkonzo
Kukho hardly na smartphone abasebenzisi namhlanje (nokusebenzisa nayo nayiphi na indlela yokusebenza) abo avume kwaziswa yi-Skype app, apho ikuvumela ukuba enze free ilizwi kwaye ividiyo unxulumano jikelele ehlabathiniSinako kanjalo alenze ukuze wonk ubani relatives okanye abahlobo nabo bahlala kwezinye izixeko okanye nkqu ngaphesheya. Kunye eli-Android smartphone app, uyakwazi ukwahlula kuphela umnxeba zonke-Skype subscribers, kodwa kanjalo nako umnxeba na landline phones naphi na ehlabathini, zithungelana kunye abahlobo nosapho nge umyalezo wesiquphe, ilizwi kwaye ingqungquthela ngevidiyo, balungise iifoto kunye nezinye ezininzi iifayile kwaye thumela kubo ngamnye enye.
Unxulumano phones kwaye mobile phones nolu setyenziso kufuna isixa esithile imali kwi-akhawunti yakho.
Nangona kunjalo, ukuba ngaba thelekisa le mali kunye isixa-mali ukuba uza sebenzisa ukulawula unxulumano namanye amazwe kwimfonomfono kwaye landline phones, ngoko kuqala enye iya kuba malunga ishumi okanye anamashumi phinda-phinda. Ne-advent ka-global mphathi, G, uyakwazi sele uyeke ukucinga apho ukufumana i-vula i-Wi-Fi hotspot, njengoko le nkqubo iza sikunika ezibalaseleyo umgangatho ilizwi ibiza kuba street. Inkqubo lula syncs lwangaphakathi nabo kunye nabo ukusuka kwi-smartphone yakho ngu ifowuni ncwadi. Kuphela caveat ukuba mhlawumbi ayinakusebenza jikelele lo mlinganiselo ye-Android yokusebenza kukuba icebo andinaku sebenzisa ngaphambili-iyonela kububanzi bephepha kuba ikhamera yevidiyo ngefowuni. Eyona ikhamera iya umsebenzi ngaphandle iingxaki, kodwa ukuba ufuna ukuyisebenzisa, awuyi kukwazi ukubona yakho companion. ungasebenzisa kunye iikhamera ngasentla kwaye ngezantsi ezi imida, ngokunjalo kuba iividiyo. nge moto g, i-Skype esisebenza kakuhle kakhulu kunye ividiyo ngefowuni, kodwa iqhosha AKUTHETHI ukuba kubonakala - omnye kunye red ifowuni.
- Ividiyo Incoko Isiturkish Incoko
Taobh thoir Flanders chun Eolas tromchúiseach
dating incoko iwebhusayithi ukuya kuhlangana nawe apho kuhlangana a kubekho inkqubela usasazo ividiyo iincoko ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko amagumbi nge-girls free online qinisekisa ividiyo incoko amagumbi-intanethi Dating site esisicwangciso-mibuzo ividiyo-intanethi kuba free ngaphandle ubhaliso watshata umfazi ifuna ukuya kuhlangana